नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामचन्द्र पौडेल एमालेको खेताला हुन – YesKathmandu.com
राजकिशोर यादव,अध्यक्ष, फोरम गणतान्त्रिक
सर्वोच्च अदालतले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खोलिसकेका बेला अकारण लामो समयसम्म संसद बैठक स्थगित गर्नुको कारणबारे संयुक्त मधेशी मोर्चालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग जानकारी लिनका लागि भेटवार्ता गर्न लागेका हौं ।
सत्तारुढ काँग्रेस–माओवादी केन्द्रकै केही नेता एमालेसँग मिलेर संशोधन विधेयक फेल गराउने डिजाइनमा लागेको निस्कर्षसहित मोर्चाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग भेट्न लागेका हौं । लामो समयसम्म बिनाकारण संसद बैठक स्थगन हुनु निश्चय पनि राम्रो संकेत होइन ।
सर्वोच्च अदालतले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन बाटो खुला गरिसकेपछि पनि एमालेले भन्दैमा किन यति लामो समयसम्म संसद बैठक रोकेको हो ? हामीलाई यसमा गम्भीर शंका छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूले पनि यस्को कारण दिनैपर्छ । कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल र माअ‍ेवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ एमालेसँग मिलेको स्पस्टै देखिन्छ । संशोधन विधेयकमा एमालेले सहयोग नगर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै काँग्रेस र माओवादीका ती नेता किन एमालेको खेताला बनेको हुन ? बुझ्न सकिएको छैन ।
एमालेबिना नै दुई तिहाई पु¥याउन लाग्नुपर्नेमा उल्टै एमालेको सहयोगी भूमिकामा सत्तापक्षकै नेता लाग्नु आश्चर्यको विषय बन्न पुगेको छ ।
माधव र रामचन्द्रले यसरी हकारेपछि लच्किएका थिए कोइराला
दिल्लीमा देउवा रअदेखि हिन्दुवादीका घरसम्म